IIKHITSHI EZINGAMA-27 EZIMANGALISAYO ZESIQITHI SESIQITHI (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhitshi ezingama-27 ezimangalisayo zeSiqithi seSiqithi (Iingcamango zoyilo)
Iikhitshi ezingama-27 ezimangalisayo zeSiqithi seSiqithi (Iingcamango zoyilo)
Le galari inezikhitshi eziziqithi ezibini kuluhlu olubanzi lobungakanani, iimilo kunye nezitayile zoyilo. Ukongeza isiqithi sekhitshi ekhayeni lakho kunika indawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya, indawo yokutyela kunye neendwendwe zokonwabisa. Ukuseta iziqithi ezibini ekhitshini lakho kuluncedo ekufumaneni ulondolozo olongezelelekileyo, isinki yesibini, indawo yokupheka eyakhelweyo / uluhlu, okanye isitayile sebhari sakusasa esidla-kwindawo yokutyela. Ayisiyiyo kuphela iziqithi ezibini ekhitshini ezibonakala zintofontofo kwaye zenza incoko entle, zikwanika indawo efunekayo yokugcina kunye nokugcina. Apha ngezantsi uyakufumana imifanekiso yeengcinga ezintle zasekhitshini kunye nezicwangciso onokuthi uzisebenzise ukulungiselela uyilo lwakho kunye neeprojekthi zokulungisa kwakhona.
Kumfanekiso ongentla ekhitshini elinendawo entle yeklasikhi ebonisa iphalethi entle emhlophe. Isebenzisa ikhabinethi yeklasikhi ekumgangatho ogqityiweyo omhlophe kunye nokuyibeka phezulu ngesilayidi esityebileyo seDamasco ezimhlophe zemabala emarble ukugqiba ukujonga. Eli khitshi lisebenzisa iziqithi zasekhitshini ezi-2: enye isebenza ikakhulu ukugcina kunye ne-oveni eyakhelweyo, kwaye enye yenzelwe indawo eyongezelelweyo yokulungiselela nanjengebar encinci / itafile yesidlo sakusasa enezihlalo ze2. Bona ngaphezulu Izimvo zesiqithi sekhitshi kwigalari engaphandle apha.
Ikhitshi elisesiqithini elinendawo yokuhlala yabantu abathathu
Ngokufana nomzekelo wangaphambili, le khitshi iya kwimixholo emhlophe yonke, kodwa endaweni yoko iya kujongeka ngakumbi. Uhlobo lwakhiwo lwangaphakathi lulula kwaye lwanamhlanje- iindonga ezimhlophe ezicacileyo kunye nophahla oluphezulu- oluhambelana nembonakalo encinci esetyenziswa ekhitshini. Ikhitshi ngokwalo libanzi linendawo enophahla eluphahleni oluncedo kakhulu ekujikelezeni komoya, ukunceda ukugcina ubushushu obutofotofo ekhitshini. Ngenxa yobungakanani bayo, iyakwazi ukulingana kwiziqithi ezinkulu zekhitshi ezi-2, zombini zixhotyiswe ngesinki eyakhelwe-ngaphakathi kunye nedrowa yokugcina kunye nekhabhathi. Isiseko somthi esimhlophe sifakwe ilitye lesepha elingwevu lomahluko othambileyo kunye nokugxininiswa kwezibane zala maxesha.
Isiqithi selizwe lesiFrentshi lasekhitshini esinye sipeyintwe mhlophe kwaye esinye sinokugqitywa okumdaka ngombala
Ikhitshi lesiFrentshi lasekhitshini elisebenzisa iikhabhathi zeplanethi ezimhlophe ezibekwe kwiindonga ezingwevu. Ngenxa yesicwangciso somgangatho esahlukileyo, ikhitshi lilandela uyilo olwahlukileyo. Iziqithi ezibini zasekhitshini zikolu luyilo, enye ikumbindi wekhitshi isebenzisa isiseko esiqinileyo saseMahogany kwaye enye ipeyintwe ngombala omhlophe. Iziko lekhitshi lesiqithi likwimo engagunyaziswanga elandela ukujikeleza kobume bekhitshi. Esinye isiqithi sekhitshi sisebenza njengesahluli esezantsi esahlula ikhitshi kwezinye iinxalenye zendlu, nanjengesibali sebhari.
Ibhlokhi yebhlokhi yesiqithi kunye nesiqithi esimhlophe se-quartz
Intsingiselo yanamhlanje ithatha uyilo lwasekhitshini oluqhelekileyo, le khitshi yesitayile yotshintsho inika ukubukeka kweklasikhi ngokuthe kratya ngokudityaniswa kwemibala kunye nokugqitywa. Iikhabhathi eziphambili zisebenzisa iikhabhathi ezisekwe ngamaplanga ezimhlophe ezifakwe iquartz emhlophe. Kukho iziqithi ezibini zekhitshi kulwakhiwo, enkulu inesitayile esifanayo kunye nokugqitywa njengeekhabhathi eziphambili, ine-sink eyakhelwe-ngaphakathi kunye nebala lokubala indawo. Kwelinye icala, ezincinci zeziqithi zimbini zasekhitshini embindini wekhitshi kwaye ngelixa zisebenzisa isitayile esifanayo esityikityiweyo iikhabhathi, zisebenzisa umpu ongumpu kwisiseko sazo kwaye siziphakamise ngebhlokile yemaphu.
Iziqithi zasekhitshini zomthi kunye nemiphezulu yeetafile zegranite
udade wentetho yomyeni
Kuba eli khitshi libanzi ngokufanelekileyo, likuvumela ukuba ungeze izinto ezininzi ngelixa ugcina ukuhamba komsebenzi kunye nokugcwala ekhitshini. Iqukethe iikhabhinethi zesitayela zakudala ekugqibeleni okumhlophe kwe-antique kunye nokugqitywa kweenkuni ze-oki kwaye kuneziqithi ezi-2 zasekhitshini. Isiqithi esinye silungiswe ngesinki eyakhelwe-ngaphakathi kunye nemisebenzi ikakhulu njengendawo yokulungiselela ukutya, ngelixa esinye isiqithi sekhitshi sisetyenziswa njengendawo yokubaleka kunye nendawo encinci yokutyela. Ngaphandle kokugqitywa kweenkuni ezinzima kwiikhabhathi zasekhitshini kunye ne-redwood flooring, ukugqitywa okumhlophe okumhlophe kweendonga kunye nophahla kunceda ukulinganisa ukugqitywa kokujongwa kobunzima kunika indawo ecocekileyo neqaqambileyo.
Iziqithi ezingwevu zekhitshi ezinemigangatho eqinileyo yomthi
Le khitshi yanamhlanje iphuma ngesibheno sobudoda ngesikim sayo sombala ongwevu nomhlophe. Imigangatho ye-wengue emnyama ayikhange ikuthintele ukusetyenziswa kokugqitywa okumnyama kule khitshi njengoko ikwadityaniswa nepeyinti ekhanyayo engwevu kumbala wodonga. Ikhitshi elineplani evulekileyo lisebenzisa ipeyinti emhlophe kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi kunye namalahle angwevu kwiziqithi zayo ezimbini zasekhitshini. Isiqithi esisembindini wekhitshi sisebenzisa umphezulu omhlophe oqinileyo ukungafani nesiseko saso esimnyama esingwevu, ngelixa isiqithi esingaphandle sekhitshi, nesisebenza njengekhitshi ‘esahlulayo’, sisebenzisa ilitye lesepha elimnyama elinamagqabi amhlophe adumileyo.
Iziqithi zasekhitshini zesiko kunye neetafile zekona ezijikeleziweyo
Into eyahlukileyo yoyilo lwekhitshi lwanamhlanje ngokuqinisekileyo iya kuba ziziqithi zayo ezimbini zasekhitshini. Ngelixa ukugqitywa kunye neekhabhathi eziphambili zekhitshi zisisiseko esihle (iikhabhathi ezinamabala e-beige kunye nezinto zokubala ezimhlophe eziqinileyo zomphezulu), yintoni eyenza ukuba iziqithi zayo zasekhitshini zikhetheke ngokubekwa kwayo nokumila kwayo. Isiqithi sasekhitshini esixande sibekwe ngokwahlukeneyo kwaye sineekona ezimbini zangaphandle ezirhangqiweyo, ngelixa esinye isiqithi sekhitshi simile okwe kidney. Uphahla oluphezulu lwenza ukuba eli khitshi libukeke likhulu kwaye liyanceda nasekujikelezeni komoya.
Ikhitshi elimile U elinesiqithi esiphindwe kabini kunye nebha yesidlo sakusasa
Ikhitshi eligcweleyo kunye neendlela zesiko zesitayile sendalo eMahogany. Ummandla uphela ubanzi, uvumela ukusetyenziswa kweziqithi ezibini zekhitshi. Isiqithi sasekhitshini esisisiqithi sisiseko esinexande lasekhitshini esine-sink kunye nesitoreji esakhelweyo, ngelixa isiqithi esingaphandle sekhitshi sisiqithi sekhitshi yohlobo lwebha, esilungisiweyo nesinki eyakhiwe. Ikhawuntara yebha ikwasebenza njengesahlulo esahlula ikhitshi kwezinye iindawo zeplanethi.
izimvo zomtshato weediliya kuhlahlo-lwabiwo mali
Iziqithi ezikhulu zekhitshi ezinendawo yokugcina ikhabhathi
Uyilo oluqaqambileyo oluhlaziyayo lwangoku lwekhitshi olwalukwazi ngokwenene ukwandisa indawo ekhoyo yokugcina kunye nokulungiselela indawo, ukudala uyilo lwekhitshi olusebenzayo. Isilingi ephezulu yandiswa ngokusetyenziswa kweekhabhathi ezingaphezulu ezifikelela eluphahleni, kwaye isebenzisa iziqithi ezibini zekhitshi ezibonelela ngendawo yokugcina kunye nokulungiselela. Uya kubona kwakhona ishelufu yokugcina iwayini, kunye nomxube omnandi weeshelfu ezivulekileyo kunye nekhabhathi ezivaliweyo zokugcina ikhabhathi. Kuba ukugqitywa kwesiseko sekhitshi kusecaleni elingathathi hlangothi (iindonga ezingwevu, isilingi emhlophe kunye nomgangatho oluthuthu oluthuthu), isebenzise ukugqitywa komthi oqaqambileyo kwiikhabhathi zasekhitshini zethoni efudumeleyo yendalo.
Amanqanaba ama-2 eekhitshi ekhitshini eludongeni olunye
Uphahla oluphezulu kunye nomgangatho omkhulu onokukhanya okusisiseko okuqaqambileyo kudala ubume obuqaqambileyo bokuyilwa kwekhitshi. Iikhabhathi zekhitshi zidibanisa iikhabhathi zemodyuli zangoku kunye nee-silhouettes ezingaphezulu, kunye nezinye izinto zesitayile sokwenza uyilo olunamandla ngakumbi. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi ziimodyuli zale mihla, zinesiseko esimhlophe kunye nomthi we teak olaminishwe ngaphezulu kweekhabhathi. Ukuhambelana nokubala okuphambili sisiqithi sekhitshi esinesiseko esilula esimhlophe esinepaneli yokuphamba emhlophe eqinileyo. Esi siqithi sasekhitshini sisebenza njenge-bar counter / itafile yesidlo sakusasa, kwaye sisebenzisa izitulo zeshishini kunye nesibane esihle seshishini. Kwindonga ejongene nayo, kukho esinye isiqithi sekhitshi esenziwe nge-gypsum eyakhiweyo kunye ne-marble emhlophe, ukukhonza kunendawo ye-bar counter kunye ne-stylist ye-bar stools ephezulu.
Ipeyintiweyo iziqithi zasekhitshini eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nekhawuntari yebhlokhi emhlophe
Ikhitshi lesiFrentshi lesiFrentshi linikwa inkangeleko yokuhlaziya ngakumbi ngokuyipenda kwakhona. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zonke zimhlophe, zikuvumela ukuba ufumane ithuba lokuzama. Ngenxa yoko, iziqithi ezibini zekhitshi zanikwa inkangeleko entsha ngepeyinti engwevu yegreyiti kunye nomphezulu wemabhile emhlophe. Ukongeza ezinye iindidi, indawo yokutya ekhitshini ithatha indawo yemarble ephezulu kunye nebhloko eqinileyo yaseMahogany yokuxhathisa ibhloko ukuze ifane nokugqitywa kwemigangatho.
Iziqithi zasekhitshini zeBeadboard ezineekhabhathi ezimhlophe kunye neekhandlela
Iikhitshi zesiqithi ezibini ziyindlela entle yokukhuthaza ubume bakho besitayile kunye nobuntu kwindawo yakho. Le khitshi ibanzi kakhulu enesimbo se-neo-classic ilayishwe ngumtsalane kunye nomlinganiswa. Ngenxa yokukhula okukhulu kwezi ziqithi zimbini ekhitshini embindini wekhitshi, inento eyoyikisayo kuyo, kodwa incinci ithoniwe phantsi kuba isiseko sipeyintiwe ngombala omhlophe, yiyo loo nto sibenza ukuba bakhangeleke kancinci. Ezi ziqithi zimbini zasekhitshini zivumela ukuhamba komsebenzi ngokufanelekileyo ekhitshini, kwaye kuvumela indawo eninzi nokuba baninzi abantu abasebenzisa ikhitshi ngaxeshanye.
Iziqithi zekhitshi elipeyintiweyo kunye nekhabhathi emhlophe nangombala oluhlaza
Ukuya kukuziva ngakumbi kwe-retro, eli khitshi lidibanisa iikhabhathi zepaneli zakudala ezinemibala enesitayile se-retro, inika olo luvo luthambileyo oluhambelana nomxholo wendlu yonke. Isicwangciso esikhulu esivulekileyo sendlu senza imeko eqaqambileyo nenomoya. Ikwasebenzisa iintlobo ngeentlobo zeempahla zefanitshala ezihlaziyiweyo kunye nezilungisiweyo, ukongeza ubuntu ngakumbi kwisithuba. Ikhitshi likwikona enye enkulu. Isebenzisa ikakhulu iikhabhathi ezimhlophe ezihonjiswe ngepeyinti ezineemerald zetyalar eluhlaza eluhlaza kunye nesiqithi esirustic esingwevu sasekhitshini esinee-countertop zebhloko eqinileyo yeWalnut embindini. Ngaphandle kwezi, kukho ikona yasekhitshini yesiqithi esinceda ukwahlula ikhitshi kuyo yonke indlu ngaphandle kokusebenzisa izahlulelo, ekuvumela ukuba ugcine ujongo oluvulekileyo oluqaqambileyo lobeko.
Iziqithi zasekhitshini ezimhlophe ezineebhari zesidlo sakusasa ezingaphezulu
Uhlobo oluhle lwenguqu ekhitshini emhlophe emhlophe echukumisayo enamaqhosha esitayile esinceda ukongeza ubuntu kwisithuba. Iikhabhathi kweli khitshi zinolwakhiwo oludweliswe ngokulula kwaye lwenziwe ngemabhile emhlophe, edityaniswe neetayile ezimhlophe zendlela engaphantsi kwiindonga zetaupe ezikhanyayo. Kuba ikhitshi libanzi, livumela ukongezwa kweziqithi ezibini zekhitshi, esinye saso sinesiseko sekhabhathi esingwevu, kwaye esinye sinesiseko esimhlophe esinamashalofu avulekileyo adityaniswe nezitulo zentsimbi.
Mint isiqithi esiluhlaza sasekhitshi esinemilenze kunye nesiqithi esimhlophe esikhanyisela ngekhandlela
Ukusetyenziswa kweekristale ezincinci zekristale kolu loyilo lweklasikhi ngokuqinisekileyo kuyongeza kwiimvakalelo zayo zokuvuna / ixesha lesitayile. Izinto zeli khitshi zinkulu kwaye zineenkcukacha ezintsonkothileyo ezifana noyilo lweklasikhi, kodwa zinikwa ukujonga okutsha ngokuzoba ngombala omhlophe. Isebenzisa i-sage green granite counter kwaye inezinye iziqithi ezizimeleyo zasekhitshini kunye nepeyinti eluhlaza kwisilumko sayo ukuhambelana nombala wezinye izinto zokubala.
Iziqithi zasekhitshini zeenkuni ezintle
Iishawari zethayile yethayile
Ukugqitywa kwamatye endalo kwakusetyenziswa ngokukhululekileyo ezindongeni nakwimigangatho yoyilo, kwaye isebenzisa umbala omhlophe okhanyayo ukubonelela ngesiseko esiqaqambileyo esingathathi hlangothi, ekuvumela ukuba ube bhetyebhetye xa uzama ezinye izinto zangaphakathi. Kananjalo, indawo ekhitshi ebanzi ikhethe ukusebenzisa indibaniselwano yokugqitywa kweenkuni zeCherry kunye neMahogany emnyama ngenkangeleko ekhaliphileyo. Iikhabhathi ezihonjisiweyo zisebenzisa ukugqitywa kwe-cherry kwiiphaneli zayo zangaphakathi, ngelixa iiphaneli zangaphandle kunye nesidumbu sisebenzisa iMahogany emnyama. Ukugqitywa kweekhabhathi zasekhitshini kukwahambelana nokubekwa kweenkuni ezisetyenziswe eluphahleni lwekhofu. Kuba eli khitshi likufutshane nendawo yokuhlala, i-bar ekhitshini yesiqithi isebenza njengesahluli esahlula iindawo ezimbini ngaphandle kokuyivala.
Iziqithi zasekhitshini zemithi yendalo ezineziqithi ezimbini zokutya isidlo sakusasa
Uyilo lwale khitshi lwanamhlanje lunobume bomgangatho owahlukileyo, kodwa lwenziwe lwasebenza ngakumbi ngocwangciso oluhle / ubeko lwekhitshi. Iikhabhathi zeenkuni eziqinileyo zeTeak zinika inkangeleko entle ngobuhle kuyilo olulula. Ikwaquka iziqithi ezibini zekhitshi: elinye liziko elinemilo yoxande kunye nekona enye enamachaphaza, ngelixa icala elingaphandle linekona emi ngokukhululekileyo ibhari yesidlo sakusasa yesiqithi sasekhitshini ukunceda ukwahlula indawo kuyo yonke indlu.
Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala yabantu abathandathu
Iinkcukacha ezintsonkothileyo ezipeyintwe ngegolide zinokubonwa kwizitayile zeBaroque zesitayile sendawo enkulu yekhitshi. Ngenxa yobunzima obunzima bezi barstools ezisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kule ndawo, uyilo lwekhitshi ligcina izinto zilunge ngakumbi ngokugcina uyilo lulula kodwa lihle ukuba litshatise izithintelo zodidi lwakudala. Iikhabhathi zonke zi-redwood eziqinileyo kunye noyilo lweplani, zine-granite enombala wekhrimu, kunye negranite emnyama kwisiqithi esiphakathi sekhitshi. Ipeyinti yodonga emthubi emthubi kunye nokubiyelwa kwamatye eludongeni kunceda ukongeza iintlobo ezifihlakeleyo zobume kwisithuba, usinike ubungakanani ngakumbi.
Isiqithi saseFrench esiqhelekileyo sase-antique yekhitshi kunye ne-butcher block counter kunye ne-cream color island
Le yenye yeekhitshi ezintle zesitayile esidibanisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo kunye nezinto ukwenza ukubukeka okungaqhelekanga. Iikhabhathi zasekhitshini zakudala zaseFrance zenza uninzi lwekhitshi. Iikhabhathi eziphambili zisebenzisa umbala okhanyayo otyheli-khrimu, kwaye ikhabhathi enkulu ye-pantry ipeyintwe ngombala oluhlaza we-matte, yongeza umbala ocacileyo wombala kwindawo engenayo itoni efudumeleyo. Isilingi ineeplanga ezinkulu ezenziwe ngomthi ezinika indawo isibheno se-rustic kwaye ibonelela ngenkxaso efanelekileyo kwizitena zentsimbi ezenziweyo ezibeka imeko yale khitshi. Ukongeza, le khitshi ine-antique yasimahla ekhitshini yesiqithi (ngaphandle kwesiqithi sayo esikhulu sekhitshi), esenziwe ngeTeak eqinileyo kunye negranite etyheli eneenkcukacha zesinyithi zokutshatisa isitulo se-retro / isitayile sevini.
Iziqithi zasekhitshini zelizwe ezinomthi omnyama nomhlophe
Ukupeyinta okugqityiweyo kugqityiwe kunye neenkcukacha zentsimbi ezenziweyo ngokwenene kuzisa i-vibe vibe yeli lizwe lesitayile sasekhitshini. Isebenzisa indibaniselwano elula kodwa emnandi yokugqiba, ukwenza uyilo lwekhitshi olunomtsalane nakwimeko yanamhlanje. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zonke zenziwe nge-walnut eqinileyo yethoni yokhuni olufudumeleyo oluhambelana nayo yonke imo yendawo, ngelixa iziko lokuvavanywa kwekhitshi liziqithi ezi-2 zekhitshi. Isiqithi esinye sekhitshi sine-black antiquet countertop ye-cream, kunye nesinye isiqithi sasekhitshini esimahhala esine-antiqued white paint kunye ne-countertop ye-block ye-walnut.
Isiqithi sekhitshi laseBarnwood sidityaniswe nesiqithi se-rustic butcher block
Ukuya kujongeka nge-rustic, ngokuqinisekileyo eli khitshi ligxininisa ukubonakala kwendalo kokugqitywa kweenkuni. Iikhabhathi zekhitshi zenziwe ngamaplanga ahlelisiweyo kwaye zigcina umbala wazo wendalo, zinika imvakalelo erustic kwindawo kunye nezinto ezahlukeneyo zokwenza. Eli khitshi njengendawo eqengqelekayo yasimahla ekhitshini yesiqithi, enesiseko esimnyama esimnyama kunye nebhloko ephezulu yebhloka, kunye nesiqithi esimile okwe-L esisebenza njengokwahlula phakathi kwekhitshi nezinye iindawo zendlu.
Isiqithi sekhitshi esinki kunye nemicrowave kunye nesiqithi sokutya sesibini
Iikhitshi zesiqithi ezibini zihlala zifunwa emva kokubonelela ngamava okutyela iindwendwe. Iindonga ezinemibala eqaqambileyo ye-marsala yongeza umnxeba wobufazi kolu luyilo lwasekhitshini oluncinci kwaye lulula lonke, limnika ubuntu ngakumbi kwaye libukeka limnandi. Iikhabhathi zohlobo lwaseFrance zonke zimhlophe, kwaye ngaphandle kwesithuba esilinganiselweyo, uyilo luyakwazi ukulingana kwiziqithi ezimbini zasekhitshini, enye yazo isebenza ngokungaphezulu njengendawo yokubala yebar, ngelixa enye inesinki eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-oveni.
Ikhitshi elimile elineziqithi
Olunye uyilo lwangoku lwekhitshi yesitayile esidibanisa imibala elula kunye nokugqitywa, ukanti ifezekisa ukubukeka okungaphelelwa lixesha kunye nobuhle. Iindonga zigqityiwe ngombala oatmeal okhanyayo ukutshatisa iithayile ze-rustic zomthi phantsi. Imibala emnandi ekhanyayo yangasemva inceda ukuba i-wengue igqibe iikhabhathi zekhitshi ziphume ngaphandle kweendonga, ngelixa iziqithi ezibini zekhitshi ezisebenzisa ezimhlophe kunye ne-oatmeal zigqiba zijongeka ngathi ziyinxalenye yokugqitywa kokuyilwa ngaphakathi.
Isiqithi samanqanaba amabini ekhitshi enekhabhathi yomnyango weglasi kunye nezixhobo zokubala ezimabhile
Amacwecwe amnandi kunye nezibane eziqaqambileyo zongeza isibheno esihle kolu loyilo lwekhitshi, ukongeza ukukhanya okufudumeleyo kwindawo yasekhitshini. Iikhabhathi zakudala ezifakwe ngamaplanga zisetyenziswa kolu luyilo kwaye zonke zigqityiwe ngombala omhlophe zaza zafakwa ngemabhile emhlophe kolo jongeko lungapheliyo. Ikwafaka iingcango zekhabhathi yeglasi yokuziva ngakumbi, kunye neziqithi zasekhitshini zokuhamba ngokuhamba kakuhle ekhitshini.
Iziqithi zasekhitshini zeGranite ezinesidlo sakusasa kunye nesiqithi esimxinwa sokulungiselela ukutya
Iikhitshi zesiqithi esiphindwe kabini ziyaxhamla kwimimandla yomsebenzi echaza ubume ngoko isebenza kakuhle ekulungiseleleni ukutya nasekuzonwabiseni. Ukulula kulula ngoyena ndoqo kule khitshi yanamhlanje ephefumlelweyo echaza ngobume bayo. Olu luyilo lubonakaliswa yimigca ecocekileyo ethe tye, ukugqitywa kokukhanya kweetoni ezishushu, ukukhanya kokukhanya kwendalo kunye nendawo eninzi yophahla. Ikhitshi lisebenzisa kuphela ukulingana okufanayo kwiikhabhathi zalo-umbala okhanyayo we-taupe ogqunywe ngegreyite ekhanyayo ye-beige, kolo jongo luthambileyo lweklasikhi. Isithuba esilinganiselweyo sithetha isiqithi esisembindini sekhitshi, ikhawuntara elula kakhulu yebhar yesiqithi sasekhitshini. Izibane zeengubo zeediliya zongeza umnxeba weemveliso kwindawo yokugqibezela ukujonga ngaphezulu.
Isidlo sakusasa esimhlophe ibha yasekhitshini iziqithi ezinezitulo
Into ebaluleke kakhulu kolu lwakhiwo lwekhitshi kukusetyenziswa okuphindaphindayo kweenkcukacha zomgca ogobileyo, ngakumbi kwisilingi. Isilingi esisongelweyo sipeyintwe ngeepateni eziphefumlelwe yintsimbi egotyiweyo, enokufumaneka ekhitshini. Ukugqitywa kobushushu obufudumeleyo, njengeendonga ezityheli kunye nomgangatho weti we-teakwood, zikwanceda iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ukuma-ngaphandle, zenza ukujonga okulungeleleneyo. Eli khitshi likwanazo iziqithi ezibini zekhitshi, zombini ezibonelela ngendawo yee-barstools, ezenza ubume bekhitshi obuguquguqukayo.
Ikhitshi elisesiqithini elinendawo yokuhlala yabantu aba-6
Eli khitshi linobubanzi obuvulekileyo linika indawo eninzi yokonwabisa kunye nokupheka isidlo sephupha lakho. Umnikelo iziqithi zasekhitshini ezahlukileyo Uyilo lubonisa isiqithi esisembindini esakhiwe kwisinki kunye nezixhobo zekhabhinethi ezinemhlophe, kunye nesinye isiqithi sokutya esihlala iindwendwe ezintandathu ezinekhabhathi yomthi emnyama. Imiqadi yeplanga ebonakalisiweyo, imiphezulu yamatye kunye nomgangatho okhuni womgangatho wonke unika eli gumbi isibheno esihle.
Isiqithi esihle semarble esimhlophe sekhitshi esinendawo yokuhlala yesi-5 kunye ne-oveni yesiqithi
Ubungakanani bekhitshi eli khitshi alikhange likuthintele ukusetyenziswa kweziqithi zasekhitshini eziphindwe kabini kwindawo eyimfuneko yokulungiselela. Iikhabhathi zaseFransi ezifakwe ipeyinti ezimhlophe zazisetyenziselwa yonke ikhitshi kwaye yahonjiswa ngemabhile emhlophe, ukuyinika ukubukeka okuhle okungapheliyo. Inkqubo ye- Isiqithi sekhitshi esinendawo yokuhlala Kolu luyilo lubonelela ngendawo yokulungiselela / imiphezulu ngenxa yokunqongophala kweekhawuntari zasekhitshini eludongeni.
yobudala avareji ukutshata kuthi
Ukuqhakaza intombi yomama womtshakazi
ukubaluleka kwendandatho yesithembiso
usetyenziso loyilo lwekhabethe
uyasithenga isipho seqela lokuzibandakanya